FITAKIANA FITSARANA MADIO : Hiroso amin’ny hetsika mafimafy kokoa ny tangalamena
Nangataka hanao hetsika fanairana tamin’ny fitondram-panjakana ny fikambanan’ny tangalamena ao Maevatanàna, mba hijery akaiky ny olan’ny Fitsarana ao an-toerana. Mikasa hametraka fanadiovana anatiny eo amin’ny tontolon’ny Fitsarana izy ireo, indrindra ny resaka ady amin’ny kolikoly. 15 mai 2019
Noho izany dia mitaky hamindrana toerana ireo Mpitsara ao an-toerana ny tangalamena. Nisy ihany mantsy ny fitakiana natao saingy tsy nahitam-bokany na tsy nisy nohainoana akory izy ireo hatramin’izao. Nampiantso mpanao gazety ny tangalamena nilaza ny hetahetany. Tamin’izany no nilazana fa olana goavana amin’izy ireo ny fampidirana am-ponja ilay depiote teo aloha sady lehiben’ny tangalamena. Tsy io ihany fa nisy olona efatra hafa ihany koa nogadrain’ny Fitsarana.
Heverin’ireto tangalamena fa valifaty io raharaha io ka manaitra ny fanjakana mba handray fepetra ny amin’izany izy ireo. Nanamafy hatrany ireto vahoaka ireto fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana ity tranga ity dia nilaza hanao hetsika mafimafy kokoa ny fikambanana. Tsy vitan’izay fa efa nangataka hanao diabe izy ireo omaly fa nosakanan’ny manam-pahefana tao an-toerana, ho fitandroana ny filaminana.